टेलिकमले ल्यायो अटम अफर, के के छन् सुविधा ? - Khula Patra
टेलिकमले ल्यायो अटम अफर, के के छन् सुविधा ?
प्रकाशित समय: २१:५६:३५
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले हिउँद सिनका लागि लक्षित गरेर अटम अफर ल्याएको छ । कात्तिक १ गतेदेखि लागु हुनेगरी टेलिकमले ३ महिनाका लागि यो अफर ल्याएको हो । यो अफर अन्तर्गत टेलिकमले सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड ५९९ अफर, सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड ७९९ अफर, सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड ९९९ अफर, सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड १४९९ अफर, सस्तो प्रिपेड कम्बो प्याक, सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड ५९९ प्याक, एफटीटीएच आइपिटिभी अफर ल्याएको छ ।
अटम अफरमा नयाँ प्याकेजका रुपमा सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याक उपलब्ध हुनेछ । यसमा ३० दिनसम्म चलाउन मिल्नेगरी ५ सय ९९ रुपैयाँमा अनलिमिटेड अननेट भ्वाइस सेवा उपलब्ध हुनेछ । यो अफर खरिद गरेपश्चात् सुलभ दरमा डाटा सेवा समेत लिन चाहेमा ग्राहकले रु. २९९ मा प्रतिदिन १ जिबीका दरले ३० दिनसम्म उपयोग गर्न सकिने ३० जिबी डाटा सेवा एड–अन प्याकको रुपमा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
प्रतिदिन प्रयोग गर्न सकिने १ जिबी डाटा सकिएमा ६४ केबिपिएसको अनलिमिटेड डाटा सेवा उपलब्ध हुनेछ जसमा ग्राहकको मेन व्यालेन्सको रकम काटिने छैन । यदि ग्राहकले ६४ केबिपिएसभन्दा बढी गतिको डाटा सेवा प्रयोग गर्न चाहेमा जम्मा ३० रुपैयाँमा १ जिबी, ४० रुपैयाँमा २ जिबी र ५० रुपैयाँमा ३ जिबी डाटा २४ घण्टाभित्र प्रयोग गर्न सकिने गरी एड–अन प्याककै रुपमा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
यसैगरी अटम अफरमा ग्राहकले ३० दिनसम्म प्रतिदिन १ जिबी प्रयोग गर्न सकिने ३० जिबी डाटा सेवाको प्याक रु. ५९९ मा खरिद गर्न सक्नेछन् । यो अफर खरिद गरेपश्चात् ग्राहकले सुलभ दरमा भ्वाइस सेवा पनि लिन चाहेमा जम्मा रु. २९९ मा ३० दिनसम्म अनलिमिटेड प्रयोग गर्न सकिने एड–अन प्याकको खरिद गर्न सक्नेछन् । यस प्याकेजमा पनि प्रतिदिन प्रयोग गर्न सकिने १ जिबी डाटा सकिएमा कम्पनीले ६४ केबिपिएस अनलिमिटेड डाटा सेवा उपलब्ध गराउनेछ । सो भन्दा बढी गतिको सेवा लिन चाहेमा जम्मा रु. ३० मा १ जिबी, रु. ४० मा २ जिबी र रु. ५० मा ३ जिबी डाटा २४ घण्टाभित्र प्रयोग गर्न सकिने गरी एड–अन प्याककै रुपमा खरिद गर्न सकिनेछ ।
यसमा जम्मा ७ सय ९९ रुपैयाँमा अनलिमिटेड अननेट भ्वाइस सेवा, प्रतिदिन १ जिबीका दरले ३० दिन प्रयोग गर्न सकिने ३० जीबी डाटा, २०० वटा अननेट सन्देश, ५० मिनेट अफ नेट भ्वाइस र ५० वटा अफ नेट सन्देश पठाउने सुविधा उपलब्ध हुनेछ । प्रतिदिनका लागि उपलब्ध १ जिबी डाटा सकिएमा माथि सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड ५९९ अफरमा उल्लिखित एड–अन प्याक खरिद गर्न सकिनेछ ।
यसमा जम्मा ९ सय ९९ रुपैयाँमा अनलिमिटेड भ्वाइस र ४ सय वटा अननेट सन्देश पठाउने सुविधा, प्रतिदिन २ जिबीका दरले ३० दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने ६० जिबी डाटा, १०० मिनेट अफ नेट भ्वाइस र १०० वटा अफ नेट सन्देश पठाउन सकिनेछ । प्रतिदिनका लागि उपलब्ध २ जिबी डाटा सकिएमा माथि सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड ५९९ अफरमा उल्लिखित एड–अन प्याक खरिद गर्न सकिनेछ ।
यसमा जम्मा १ हजार ४ सय ९९ मा अनलिमिटेड भ्वाइस, १००० वटा अननेट सन्देश पठाउने सुविधा, प्रतिदिन ४ जिबीका दरले ३० दिन प्रयोग गर्न सकिने १२० जिबी डाटा, २०० मिनेट अफ नेट भ्वाइस र २०० वटा अफ नेट सन्देश पठाउन सकिने सुविधा उपलब्ध हुनेछ । प्रतिदिनका लागि उपलब्ध ४ जिबी डाटा सकिएमा माथि सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड ५९९ अफरमा उल्लिखित एड–अन प्याक खरिद गर्न सकिनेछ ।
यसमा प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि १५० मिनेट भ्वाइस, १.५ जिबी डाटा र १५ वटा अननेट सन्देश (अननेट) जम्मा २ सय ९९ रुपैयाँमा २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
यसमा जम्मा ५ सय ९९ रुपैयाँमा प्रतिदिन १ जिबीका दरले २८ दिन प्रयोग गर्न सकिने २८ जिबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । यो प्याक लिएका ग्राहकहरुले अनलिमिटेड भ्वाइस सेवा लिन चाहेमा जम्मा २ सय ९९ रुपैयाँमा २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने एड–अन प्याक खरिद गर्न सक्नेछन् ।
एफटीटीएच आईपीटीभी अफर–२०७८ मा कम्पनीको एफटीटीएच अन्तर्गतको ट्रिपल प्ले (भ्वाइस, डाटा र टिभी) सेवा एक वर्षका लागि लिने ग्राहकका लागि आकर्षक सहुलियत उपलब्ध हुनेछ । यस अन्तर्गत २५ एमबिपिएस व्याण्डविथ वार्षिक जम्मा १५ हजार ९ सय ८० रुपैयाँमा प्राप्त हुनेछ । यही सेवा वर्षको ४० एमबीपीएस १७ हजार १ सय रुपैयाँ र ८० एमबीपीएस २२ हजार ५ सय रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । वार्षिक सेवा लिनेका लागि कम्पनीले सेटअप बक्स उपलब्ध गराउनेछ ।
यही सेवा ३ महिनाको लागि २५ एमबिपिएसको ४ हजार १ सय रुपैयाँमा ४० एमबीपीएसको ५ हजार ५ सय रुपैयाँमा र ८० एमबीपीएसको जम्मा ७ हजार २ सय रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । मासिक रुपमा सेवा लिदा २५ एमबीपीएस १ हजार ४ सय रुपैयाँमा, ४० एमबीपीएस १ हजार ८ सय ५० रुपैयाँमा र ८० एमबीपीएस जम्मा २ हजार ४ सय ५० रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ ।
एफटीटीएचमा उपलब्ध सेवाहरुमध्ये भ्वाइस र डाटा सेवा मात्र पनि सहुलियत दरमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसमा २५ एमबीपीएस डाटा १ हजार रुपैयाँमा, ४० एमबीपीएस डाटा १ हजार ५ सय रुपैयाँमा र ८० एमबीपीएस डाटा २ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । यी सेवाहरु ३ महिनाका लागि लिदा २५ एमबीपीएस डाटा २ हजार ८ सय ५० रुपैयाँमा, ४० एमबीपीएस लिदा ४ हजार २ सय रुपैयाँमा र ८० एमबीपीएसलाई ५ हजार ५ सय रुपैयाँमा लिन सकिनेछ । यो सेवा वार्षिक रुपले लिदा २५ एमबीपीएसको १० हजार ५ सय रुपैयाँमा, ४० एमबीपीएसको १५ हजार ३ सय रुपैयाँमा र ८० एमबीपीएसको २० हजार ५ सय रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ ।
एफटीटीएचबाट डाटा सेवा मात्र लिन चाहने ग्राहकका लागि कम्पनीले प्रिमियम इन्टरनेट सर्भिस प्याक सुलभ दरमा उपलब्ध गराउने भएको छ । यसमा डाटा सेवा मात्र एक वर्षका लागि लिंदा ५० एमबीपीएसको २४ हजार ८ सय रुपैयाँमा, ८० एमबीपीएसको ३२ हजार ८ सय रुपैयाँमा र १०० एमबीपीएसको ४० हजार ८ सय रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । ३ महिनाको लागि डाटा सेवा लिदा ५० एमबीपीएसको १२ हजार ६ सय रुपैयाँमा, ८० एमबीपीएसको १६ हजार ५ सय रुपैयाँमा र १०० एमबीपीएसको २० हजार रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । एक महिनाको लागि ५० एमबीपीएसको ४ हजार ५सय रुपैयाँमा, ८० एमबीपीएसको ६ हजार रुपैयाँमा र १०० एमबीपीएसको ७ हजार ५ सय रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ ।
यसैगरी डाटा र इन्टरनेट दुवै सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि कम्पनीले प्रिमियम इन्टरनेट सर्भिस विथ आइपिटिभी प्याक उपलब्ध गराउने भएको छ । यसमा एक महिनाका लागि सेवा लिदा ५० एमबीपीएसको ५ हजार १ सय ७८ रुपैयाँमा, ८० एमबीपीएसको ६ हजार ६ सय ७८ रुपैयाँमा र १०० एमबीपीएसको ८ हजार १ सय ७८ मा उपलब्ध हुनेछ । ३ महिनाको सेवा लिदा ५० एमबीपीएसको १४ हजार ५ सय २३ मा, ८० एमबीपीएसको १८ हजार ४ सय २३ रुपैयाँमा र १०० एमबीपीएसको २१ हजार ९ सय २३ रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । एक वर्षको सेवा लिदा ५० एमबीपीएसको ३१ हजार ३ सय ९ रुपैयाँमा, ८० एमबीपीएसको ३९ हजार ३ सय ९ रुपैयाँमा र १०० एमबीपीएसको ४७ हजार ३ सय ९ रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । यस प्याकको खरिदमा सेटअप बक्सकोको शुल्क समावेश गरिएको छैन ।
विभिन्न प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *1415# डायल गर्नुपर्नेछ । कम्पनीको ‘नेपाल टेलिकम’ एपबाट यस सम्बन्धी जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np मार्फत यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।